यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ क्यान्सरको उच्च जोखिम, यस्ता संकेत देखिए जाँच गराइहाल्नुहोस् – Sandesh munch
शनिबार ०४ बैशाख २०७८
यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ क्यान्सरको उच्च जोखिम, यस्ता संकेत देखिए जाँच गराइहाल्नुहोस्
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ०३, २०७७ समय: १९:१४:४८
काठमाडौँ । क्यान्सरका थुपै कारण हुन सक्छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैली र खानपिन नै हो । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ।
जिवित रहँदासम्म हाम्रो शरीरमा जीवन सम्वन्धी कयौं क्रियाहरु चलिरहन्छन्। यसैमध्ये एउटा क्रिया कोशिकाहरु अर्थात् सेल्स बन्नु हो।
यो क्रियामा शरीरका पुराना र मृत कोशिकाहरु आफै नष्ट भइरहन्छन् तर तिनको स्थानमा नयाँ कोशिकाहरु बनिरहन्छन् । यो प्रक्रिया हाम्रो शरीरमा सँधै चलिरहन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
तर, क्यान्सर भएको अवस्थामा शरीरमा रेड ब्लड सेल्स र ह्वाइट ब्लड सेल्स अनावश्यकरुपमा बढ्न थाल्छ। यी क्यान्सरका कोशिकाहरु बिस्तारै-बिस्तारै शरीरमा फैलिन्छन् र स्वस्थ कोशिकाहरुको काममा पनि बाधा पुग्छ। यीनै रोगी कोशिकालाई क्यान्सर भनिन्छ।
हाम्रो शरीरमा पनि कम्प्युटरमा जस्तै धेरै प्रकारका कोडिङ हुन्छन्, जुन जिनको माध्यमबाट हाम्रो बुवाआमाद्वारा हाम्रो शरीरमा आउँछन्।
चुरोट, सुर्ति, नशालु पदार्थ तथा गलत खानपानको कारणले हाम्रो कोशिकाहरुको जेनेटिक कोड बदलिन्छ र यही हाम्रो शरीरमा क्यान्सरको कारण बन्छ । त्यसैले क्यान्सरबाट बच्न हाम्रो जीवनशैलीमा अलिकति परिवर्तन आवश्यक छ।
सुर्तिको सेवन तुरुन्त छाडौं
कुनै पनि प्रकारको क्यान्सरको खतरा सुर्ति खाने तथा चुरोट पिउने व्यक्तिहरुमा अत्यधिक हुन्छ। त्यसैले क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगबाट बच्नु छ भने सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ।
चुरोट पिउँदा फोक्सोको क्यान्सर, किड्नीको क्यान्सर ब्ल्याडरको क्यान्सर र गर्भाशयको क्यान्सर हुन सक्छ। सुर्ति र गुट्खा खाँदा मुख र पाचन ग्रन्थिमा क्यान्सर हुन सक्छ। क्यान्सरमा ९० प्रतिशत घटनामा यसको सबैभन्दा ठूलो कारण चुरोट वा सुर्ति नै रहेको पाइएको छ।
बिडी वा चुरोट
बिंडी वा चुरोट पिउँदा शरीरमा क्यान्सर उत्पादक तत्व प्रवेश गर्छन् । यी तत्वले स्वस्थ कोशिकाहरुलाई रोगी कोशिकाहरुमा बदलिदिन्छन् र यही कोशिकाहरु क्यान्सरमा परिणत हुन्छन्।
चुरोट वा बिँडी सेवन नगर्ने तर अरुले फालेको धुवाँको सम्पर्कमा निरन्तर बसिन्छ भने पनि खतरा त्यत्तिकै हुन्छ जति पिउने व्यक्तिलाई।
शरीरलाई फुर्तिलो राख्ने र तौल नियन्त्रण
शरीरको वजन अनियन्त्रितरुपमा बढ्नु पनि क्यान्सर र यस्ता कैयन गम्भीर रोगको कारण हुन सक्छ। वजनलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि तपाईंले हरेक दिन शारीरिक परिश्रम गर्नु आवश्यक छ।
दिनभरी एकै ठाउँमा बसेर काम गरिन्छ भने बिहान वा बेलुका समय निकालेर आधा घन्टा ब्यायाम गर्ने गरौं। शरीरको फिटनेसकालागि यो आवश्यक छ कि जति क्यालोरी खानामा लिइन्छ, त्यसको प्रयोग हुनुपर्छ, अन्यथा शरीरमा बोसो जम्न थाल्छ र मोटोपना बढ्न थाल्छ।
मोटोपनाको कारणले मूत्राशयको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, गर्भाशयको क्यान्सर, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर आदिको खतरा बढेर जान्छ।
शरीरलाई रोगबाट बचाउनका लागि, फिटनेसका लागि र दिनभर कामका लागि आवश्यक उर्जा पाउन पौष्टिक आहार आवश्यक हुन्छ।
पौष्टिक आहारको अर्थ फल, सागपात, दूध, अन्डा र ड्राइ फ्रुट्स हो। यसका अलावा पनि खाने हो, त्यसको गुणस्तर र सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ।
घरमा प्रयोग हुने तेल, मसला र रासनको गुणस्तरमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। फलफुल खरिद गर्दा तिनीहरुलाई पकाउनका लागि कुनै केमिकल प्रयोग गरिएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुस।
मिसावटयुक्त र केमिकलयुक्त दूध तथा यसबाट बनेको पनिर, मिठाई र व्यञ्जनको प्रयोगले पनि शरीरलाई कयौं प्रकारले नोक्सानी पुर्‍याउँछ । खानामा बढिभन्दा बढि गेडागुडी र दालको प्रयोग गरौं।
बाहिरका जंक फुडहरुमा क्यालोरीको मात्रा पनि बढि हुन्छ र यसमा स्वाद बढाउनका लागि कैयौ हानिकारक तत्वहरु प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसैले शरीरलाई आवश्यक मात्रामा मात्र पौष्टिक आहार लिनुपर्छ
सुर्यको किरण शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ, तर, एउटा सिमासम्म मात्र । ओजन तहमा प्वाल हुनाले घामको साथमा हानिकारक अल्ट्राभ्वाइलेट किरणहरु पनि आउँछन् जो शरीरका लागि हानिकारक हुन्छन्। यी किरणहरुको सम्पर्कमा लामो समय रहँदा स्किन क्यान्सरको खतरा पैदा हुन्छ।
सनस्त्रिmनले केही हदसम्म यी हानिकारक किरणहरुको प्रभावबाट बचाउँछ । तर, यसका अलावा घाममा निस्कदा आफ्नो पुरा शरीरलाई ढाक्नु उपयुक्त हुन्छ। आँखालाई यी हानिकारक किरणहरुबाट बचाउनका लागि सनग्लास लगाउने र बढि गाढा रंगका लुगा लगाउनुपर्छ।
अल्कोहल खतरनाक हुन्छ
शरीरका लागि आवश्यकताभन्दा बडि अल्कोहल खतरानक हुन्छ र यसले क्यान्सरको पनि खतरा उत्पन्न गर्छ । अल्कोहल बढि मात्रामा लामो समयसम्म सेवन गर्दा फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र गुदा क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले अल्कोहलको सेवन आजैबाट त्यागौं।
१९७ पटक हेरिएको
७.	श्रीमानलाई खुसी बनाउँन गर्नुहोस्, यी १० काम
८.	काठमाडौँको बालाजु बसपार्कमा देखियो यस्तो हेर्नुस जहाँ युवतीहरु बार्गेनिगं गर्दै (भिडियो सहित )